Akụkọ - Okwu Mmalite Ufọdụ Pfọdụ Ihe Plastik Ego
Okwu Mmeghe Plastics Nri Nri
Nyocha nke Ihe Ọmụma Ahụ Ike nke PP, PC, PS, Bottle Water Plastic
A pụrụ ịhụ karama mmiri plastik n'ebe niile ná ndụ. Karama mmiri rọba na-eguzogide ịda, dị mfe ibu, ma mara mma n'ọdịdị, ya mere ọtụtụ ndị na-ahọrọ karama mmiri plastik mgbe ha na-azụ karama mmiri. N'ezie, imirikiti ndị mmadụ amaghị ihe eji eji mmiri rọba eme ihe, ha anaghị etinyekarị uche na nhazi na nchekwa nke ihe eji agba mmiri, ma na-elegharakarị nchekwa ihe nke karama mmiri anya.
Ihe ndị a na-ahụkarị maka karama mmiri plastik bụ Tritan, PP plastic, PC plastic, PS plastic. PC bụ polycarbonate, PP bụ polypropylene, PS bụ polystyrene, na Tritan bụ ọgbọ ọhụrụ nke ihe copolyester.
Eyi bụ otu n'ime ihe nchekwa plastik kachasị adị ugbu a. O nwere ike iguzogide oke okpomọkụ ma nwee ike ikpo ọkụ na oven microwave. Ọ nwere nguzogide okpomọkụ dị mma, mana ọ bụghị ike, dị mfe ịkwụsị, ma nwee nghọta dị ala.
Ihe PC nwere bisphenol A, nke a ga-ahapụ mgbe ekpughere ya na okpomọkụ. Ogologo oge nke akara nke bisphenol A ga-emerụ ahụ ike mmadụ. Somefọdụ mba na mpaghara machibidoro ma ọ bụ machibido PC.
Ihe PS bụ ihe nwere oke nghọta na elu elu. Ọ dị mfe ibipụta, ma nwee ike ịcha ụcha kpamkpam, enweghị isi, enweghị ụtọ, anaghị egbu egbu, ọ naghị ebute ero ero. Ya mere, ọ ghọọla otu n'ime ihe plastik ndị ama ama.
Ndị na-emepụta ihe na-eche nrụgide nke ahụike na nchebe gburugburu ebe obibi ihu ma na-achọ ihe ndị nwere ike dochie PC.
N'ahịa ahịa a, Eastman nke United States amalitela ọgbọ ọhụrụ nke copolyester Tritan. Olee uru ya bara?
1. Ezi permeability, ìhè transmittance> 90%, haze <1%, na kristal-dị ka luster, otú ahụ ka karama Tritan bụ nnọọ uzo ma doo anya dị ka iko.
2. N'ihe banyere nguzogide kemịkal, ihe Tritan nwere uru zuru oke, ya mere enwere ike ihichapụ karama Tritan ma kpochaa ya na ihe dị iche iche, ha anaghị atụ egwu nsị.
3. O nweghị ihe ndị na-emerụ ahụ wee zute ihe achọrọ maka nchedo gburugburu na ahụike; ezi ike, ike dị elu; elu na-eguzogide okpomọkụ n'etiti 94 ℃ -109 ℃.